Wax walba sanadkaan waa dhif iyo naadir, illaa laga gaaro astaanta Osaka 2025 | Abuurista khadka tooska ah
Mararka qaarkood waxaa jira astaamo gaar ah oo si dhib yar u muuqda in loo sameeyay inay matalaan Osaka 2025 World Expo. Tanina waa waxa ku dhacaya isla astaanta Osaka 2025 taas oo naga dhigaysa waxoogaa jahwareer ah markaan isku dayno inaan ka helno nooc ka mid ah is waafajinta.
Malaha fowdada taasi waa soo saar leh astaan ​​bixin karta farriimo badan ama midna. Waxaa laga yaabaa in tani ay tahay waxa aad rabto inaad u matasho Osaka 2025 ee World Expo, sida Seville sanado badan ka hor ahayd.
Marka waxaan dhihi karnaa waa sidaas mid ka mid ah astaamaha dhifka ah in aynaan waligeen u arag dhacdo noocan ah; Hagaag Naranjito koobkeena aduunka hubaal wuu lahaa taas. In kasta oo halkan uguyaraan xagga qaababka ay leedahay dhibicdeeda casriga ah.
- ?? (@ Yaasiin7) August 26, 2020
Waxaanuna ka hadlaynaa astaan ​​ay qaarkood ku jiraan qaabab wareeg ah oo u eg ukun ama xitaa yaanyo, waxay leeyihiin faahfaahinta "isha" suurtogalka ah ee cad oo leh bartaas oo buluug ah sidoo kale wareegsan. Way yar tahay shaki la'aan.
Como haduu wax sameysmayo waqtigana ma ogin waxa uu yahay. Runtu waxay tahay inay weli jiraan 5 sano ilaa Osaka 2025 loo dabbaaldego, markaa wali waxaa jira dhar badan oo la jarayo; Mana ahan cadaabtan 2020 wali.
Inta aan ognahay, tan naqshadda waxaa laga xushay 5.984 galitaan, marka waa hubaal inay qasab ku noqotay inay madaxooda wax yar jabiyaan si ay u doortaan, ama aafadaani waxay ina wada saameyneysaa anaga oo aan ka warqabin.
Bandhigan oo ah Osaka wuxuu hiigsanayaa iskaashi caalami ah in la abuuro bulsho uu qof walba ku guuleysan karo himilooyinkiisa isla markaana muujiyo kartidiisa dhabta ah. Hagaag, waxaan idhi, waan arki doonaa sida wax waliba usocdaan ilaa 2025, waqtigaan oo ah 2020-ka ayaa dhamaanaysa ... Inta aan arki doonno kuwan Maaskarada wajiga ee cajiibka ah ee Burker King.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Astaanta qalaad ee Expo 2025 ee Osaka ee Japan